समाचार - स्क्रिन रक्षकले तपाईंलाई फाइदा पुर्‍याउँछ !!!
मोबाइल फोन तल झर्दा यदि तपाईंको स्क्रिन स्क्र्याच र टुटेको छ भने तपाईंको भावना के हो? त्यसो भए तपाई के गर्नुहुन्छ?
१. तपाईं नयाँ एक मोबाइल फोन किन्नका लागि अमेरिकी डलर 00०००००००० खर्च गर्न आपत्तिजनक हुनेछ? विशेष फोन केवल तपाईको आधा वा एक बर्षको कम्पनी मात्र हो?
२. वा मोबाइल फोन मर्मत गर्न वा परिवर्तन गर्न USD60-100 खर्च गर्दै हुनुहुन्छ?
टेक्नोलोजीको विकासको साथ, स्मार्टफोन वा अन्य उपकरणहरू नियमित भागको रूपमा टच स्क्रीन भेला हुन्छन्। स्क्रिन ब्रेक वा टच भावना खराब भएमा यसले राम्रो कार्य गर्दैन।
जबकि स्क्रीनहरू पहिले प्रयोग गरेको भन्दा अधिक टिकाऊ छन्, तिनीहरूले अझै पनि क्र्याक्स र स्क्र्याचहरू सहन सक्छन्। फोन क्षति अक्सर दैनिक प्रयोगको लागत हो। यो हुन सक्दछ जब तपाईंको स्क्रिनको विरूद्ध हिट वा उच्च दबाव, वा तपाईंले गल्तिले छोड्दा उपकरणहरूमा क्र्याक फेला पार्न सक्नुहुनेछ। दुर्घटनाहरू हुन्छन् जब तपाईं यसलाई सबै ठाउँमा लैजानुहुन्छ तपाईं जानुहुन्छ।
यदि तपाईं अधिक समस्या र लागत प्राप्त गर्न चाहनुहुन्न भने, स्मार्ट तरिकाले उपकरणहरूको स्क्रीनको लागि सुरक्षा प्राप्त गर्दैछ। नियमित स्क्रिन संरक्षकको सामान्यतया १० $ र २० डलरको बीचमा खर्च हुन्छ, र यो राम्रो लगानी हुनेछ।
के औसत व्यक्तिलाई तिनीहरूका उपकरणहरूको लागि स्क्रीन संरक्षक चाहिन्छ? स्क्रिन रक्षकको फाइदा भनेको यो एक दुर्घटना को मामला मा अतिरिक्त बीमा प्रदान गर्दछ। तपाईं एक स्क्रिन प्रोटेक्टर स्क्र्याच गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यसलाई कम मूल्यको लागि प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
अन्तत: तपाईलाई पर्दा संरक्षक चाहिएको छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नको लागि यो तपाईमा निर्भर छ। तपाईको स्थितिमा निर्भर रहँदा यो स्मार्ट खरीद हुनसक्दछ - विशेष गरी यदि तपाईसँग रकम एकै पटकमा बदल्न वा मर्मत गर्न कोषको अभाव छ।
स्क्रिन रक्षकको विकासको साथ, त्यहाँ पातलो गिलासमा अधिक प्रकारका प्रकार्यहरू हुन्छन्, वा PMMA, PET आदि जस्तो एन्टि निलो बत्ती, एन्टि-ग्लेर, प्राइभेसी, एंटी ब्याक्टेरिया, इत्यादि। टेम्पर्ड फिल्म वा स्क्रिन प्रोटेक्टरहरू मोबाइल फोन, प्याड, ट्याब्लेट, ल्यापटप, स्मार्टवाच, प्रो प्रो, क्यामेरा, र आईफोन, सामसु,, गुगल, हुवावे, एमआई, भिभो, ओप्पो, मोटोरोला, कालो शार्कको लागि उपयुक्त छन् , आदि र कार, मेशिन, आदि का लागि स्क्रीन संरक्षक।